आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डममा कानून फर्म | Law & More | नेदरल्यान्ड्स
के तपाईं नेदरल्याण्ड्समा कानूनको खोजी हेर्दै हुनुहुन्छ?
आइन्डहोभन र एम्स्टर्डममा कानून फर्म - Law & More
मा वकिलहरु को हुन् Law & More?
हामी एक अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र, डच कानून को विभिन्न क्षेत्रहरु मा विशेष संग एक गतिशील डच कानून फर्म हो। हामी डच, अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, पोलिश, टर्की, रूसी र युक्रेनी बोल्छौं। हाम्रो फर्म कम्पनीहरु, सरकारहरु, संस्थाहरु र व्यक्तिहरु को लागी कानून को क्षेत्रहरु को एक ठूलो संख्या मा सेवाहरु प्रदान गर्दछ। हाम्रा ग्राहकहरु नेदरल्याण्ड र विदेश बाट आउँछन्। हामी हाम्रो प्रतिबद्ध, सुलभ, संचालित, कुनै बकवास दृष्टिकोण को लागी परिचित छौं।
तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ Law & More लगभग सबै मामिलाहरूको लागि जुन तपाईंलाई एक वकील वा कानूनी सल्लाहकार चाहिन्छ।
• तपाईंको चासो सधैं हाम्रो लागि सर्वोपरि हुन्छ;
• हामी सिधै पहुँच गर्न सक्दछौं;
• भेटहरू फोनद्वारा गर्न सकिन्छ (+ 31403690680 or + 31203697121), ईमेल (info@lawandmore.nl) वा हाम्रो अनलाइन उपकरण मार्फत lawyerappointment.nl;
• हामी उचित दरहरू लिन्छौं र पारदर्शी रूपमा काम गर्छौं;
• हाम्रा आइन्डहोभन र एम्स्टर्डममा अफिसहरू छन्।
के तपाईंको विशिष्ट प्रश्न वा अवस्था हाम्रो वेबसाइटमा छैन? हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। सम्भवतः हामी तपाईंलाई पनि मद्दत गर्न सक्दछौं।
Dounia अल अटारी
म यस सेवा संग धेरै सन्तुष्ट छु Law & More। त्यहाँ जबरजस्ती राम्रो र द्रुत संचार थियो, यसको परिणाम स्वरूप मलाई के आवश्यक छ त्यसको द्रुत समाधान भयो। ऊ सिधै र होशियारसाथ चाँडो काम गर्न गयो वास्तव मा एक सिफारिश!
मलाई सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रियामा मद्दत गरिएको थियो। मैले एक पेशेवर टीमको उच्च योग्यता प्राप्त गरेको छु। सहयोगको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ग्राहकको व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो, ग्राहकको विशिष्ट अवस्था र रूचिलाई ध्यानमा राख्दै।
म दुई वर्षमा दुई पटक टम पुगेको छु किनकि मलाई द्रुत रूपमा दुबै केसमा ग्राहकको साथ ठूलो मुद्दामा कानुनी सल्लाह चाहिएको थियो। उसले सधैं मलाई लिने सर्वोत्तम कदमहरू दिए, मलाई हर पलमा सहयोग गर्दै, बिभिन्न रंग र मुद्दाको मुद्दालाई राम्ररी बुझेर उनी दुबै पटक प्रतिक्रियात्मक थिए, र हामी ग्राहकसँगको अदालतको सम्झौता बाहिर फेला पार्न सक्छौं, र माथि त्यो एक मैत्री राख्न र ग्राहक संग जारी व्यापार सम्बन्ध। धन्यवाद!
म सिसाको जुत्तामा अफिसमा पसेँ र मेरो हातमा नगरपालिकाको एउटा पत्र लिएर मेरो डेकेयर बन्द हुनेछ। तर आपत्ति पत्र यति व्यावसायिक रूपमा लेखिएको थियो कि मेरो दिन हेरचाह केन्द्र सुनुवाई पछि खुला रहन सक्छ! शीर्ष काम डेलिभर गरियो!
सिन्द्र ओसेपा, आइन्डहोभेन
टम एक धेरै ज्ञानी वकिल हो जसले मलाई विभिन्न कानुनी टुक्राको संख्या बीचको सम्बन्धको बर्णनको व्याख्या गर्न ठूलो काम गरे।
कोएन, डे कोक
सहमत समय भित्र पेशेवर सल्लाह प्राप्त भयो। धेरै सन्तुष्ट र अत्यधिक कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा एम .Hodak सिफारिस।
भ्लाड डोब्रोभिन्स्की, एम्स्टर्डम
हाम्रो वकिलहरूको कार्य विधि
कानूनी मामिलामा तपाईको स्थान र के बारे मा जान्नुहोस् Law & More तिम्रो लागि गर्न सक्छौ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। तपाईसँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ र हाम्रो प्रश्न टेलिफोन वा इ-मेल मार्फत हाम्रो वकिललाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। यदि चाहानुहुन्छ भने, तिनीहरू तपाईंको लागि अपोइन्टमेन्टको अनुसूची गर्नेछन् Law & More कार्यालय।
२. मुद्दाको छलफल गर्दै
कानून र कार्यालयमा नियुक्तिको समयमा हामी तपाईंलाई थप जान्न र तपाईंको कानूनी मामिलामा पृष्ठभूमि र सम्भावित समाधानहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। को वकिल Law & More ठोस सर्तमा तिनीहरूले तपाईंको लागि के गर्न सक्दछन् र तपाईंको अर्को चरणहरू के हुन सक्दछ भनेर पनि संकेत गर्दछ।
Step. चरणबद्ध चरण योजना
जब तपाईं निर्देशन दिनुहुन्छ Law & More तपाइँको रुचि प्रतिनिधित्व गर्न, हाम्रो वकिलहरु सेवाहरु को लागी एक सम्झौता लिनेछ। यो अनुबन्धले उनीहरूसँग तपाईंसँग पहिले छलफल गरेको व्यवस्थाको वर्णन गर्दछ। तपाईंको केस सामान्यतया तपाईंसँग सम्पर्कमा भएको वकील द्वारा गरिन्छ।
The. मुद्दा चलाउने
तपाईंको केस ह्यान्डल गर्ने तरिका तपाईंको कानुनी प्रश्नमा निर्भर गर्दछ, जुन सम्बन्धित हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, सल्लाह बनाउने, सम्झौताको मुल्या .्कन गर्ने वा कानूनी कार्यवाही गर्ने। मा Law & More हामी बुझ्दछौं कि हरेक ग्राहक र उसको अवस्था फरक हुन्छ। यसैले हामी व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रयोग गर्दछौं। हाम्रो वकिलहरु जहिले पनि कुनै कानुनी मुद्दा छिटो हल गर्न को लागी प्रयासरत छन्।
कहिले एक वकिल आवश्यक छ?
तपाइँ एक सम्मन प्राप्त गर्नुभएको छ र चाँडै न्यायाधीश को सामु उपस्थित हुनु पर्छ जो शासन गर्नेछ ... थप पढ्नुहोस्
वकिलले के गर्छ?
क्षति अरु कसैको हातमा पर्यो, पुलिस द्वारा गिरफ्तार गरियो वा गर्न चाहने ... थप पढ्नुहोस्
केहि परिस्थितिहरुमा, एक कर्मचारी जसको रोजगार अनुबंध समाप्त हुन्छ एक कानूनी रूप मा निर्धारित को हकदार छ ... थप पढ्नुहोस्
एक वकिल को लागत असाइनमेन्ट को प्रकार र यसको अवधि मा निर्भर गर्दछ।
हाम्रो कानूनी सेवाहरूको लागतहरू सामान्यतया प्रति घण्टा दरमा आधारित हुन्छन् र समय-समयमा शुल्क लिइन्छ। कहिलेकाँही, तथापि, एक निश्चित मूल्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ। Law & More अग्रिम रूपमा असाइनमेन्टसँग सम्बन्धित लागतहरूको एक अनुमान वा कथन प्रदान गर्न तयार छ। पछि, तपाईले जहिले पनि बिताउनु भएको घण्टा र काम गरेको स्पष्ट विवरण प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Law & More निम्न प्रति घण्टा दरहरू लागू गर्दछ:
वकील € १ € - - 195 २२225
पार्टनर € 250 - 275 २XNUMX
सबै दरहरू २१% भ्याट् बाहिर छन् दरहरू वार्षिक रूपमा संशोधित गर्न सकिन्छ।
Law & More डच कानूनी सहायता बोर्डसँग सम्बद्ध छैन र 'थप' को आधारमा सेवाहरू प्रस्ताव गर्दैन। यदि तपाईं अनुदान प्राप्त कानुनी सहायताका लागि योग्य हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईंलाई अर्को कानून फर्मलाई सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइन्छ।
कुनै कानूनी मुद्दा के हो, वकिलहरु मा Law & More कुनै पनि कानुनी मामिलाको सुरूदेखि अन्तसम्म मार्गदर्शन र सहयोग गर्न सक्दछ, राम्रो विचारको आधारमा, किनारा रणनीतिमा। चाहे ड्राफ्टिंग र कानूनी कागजात समीक्षा वा तपाइँको मुद्दामा कानुनी सल्लाह प्रदान गर्ने, Law & More तिम्रो लागि त्यहाँ छ! हाम्रो कानून फर्मले दुबै व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई कानुनी विवाद समाधान र लिटि services्ग सेवाहरू प्रदान गर्दछ, र सन्तुलित अवसर र जोखिम मूल्या assess्कन गर्दछ सबै कानूनी कार्यवाही अघि थप, Law & More एक सल्लाहकार र अभियोगीको रूपमा तपाईलाई कानूनी सेवाहरू मात्र प्रदान गर्दैन, तर तपाईंलाई एक स्पिरि partner पार्टनरको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
प्रत्येक कानूनी मुद्दा को लागी, वकिलहरु मा Law & More steps चरणहरूसहितको स्पष्ट रणनीति लागू गर्नुहोस्: एक अर्कालाई चिन्ने, एकसाथ मुद्दा छलफल गर्ने, चरणबद्ध चरण योजना कार्यान्वयन गर्ने र मुद्दा चलाउने।
तपाईंलाई कहिले वकिल चाहिन्छ?
तपाईं एक उद्यमी वा एक निजी व्यक्ति कानूनी समस्याको साथ सामना गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई समाधान भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यसोभए वकिललाई बोलाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। जे भए पनि, तपाई एक उद्यमी हो वा एक व्यक्ति, कुनै पनि कानुनी मुद्दाको ठूलो आर्थिक, सामग्री वा तपाईंको व्यवसाय वा तपाईंको जीवनमा अप्रिय प्रभाव हुन सक्छ। मा Law & More, हामी बुझ्छौं कि हरेक कानुनी मुद्दा एक धेरै धेरै हुन्छन्। त्यसकारण, प्राय जसो कानून फर्महरू विपरीत, Law & More तपाइँलाई थप केहि प्रदान गर्दछ। जबकि प्राय जसो कानून फर्महरूसँग मात्र हाम्रो कानूनको सीमित अंशको ज्ञान हुन्छ र नियमित कार्य गर्दछ, Law & More विस्तृत र विशिष्ट कानुनी ज्ञान, द्रुत सेवा र व्यक्तिगत दृष्टिकोणको अतिरिक्त तपाईंलाई प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, हाम्रो वकिलहरु पारिवारिक कानून, रोजगार कानून, कर्पोरेट कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून, घर जग्गा कानून र अनुपालन को क्षेत्र मा विशेषज्ञ छन्। र जब यो व्यवसायको कुरा आउँछ, Law & More उद्योग, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य सेवा र खुद्रा को विभिन्न शाखाहरु मा उद्यमीहरु को लागी कार्य गर्दछ।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ? Law & More आइन्डहोभनमा एउटा कानुनी फर्मले तपाइँको लागि गर्न सक्छ? त्यसपछि सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More, हाम्रो वकिलहरू तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछन्। तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ
Phone फोन द्वारा: +31403690680 वा +31203697121
• इमेल बाट: info@lawandmore.nl
Of को पृष्ठ मार्फत Law & More: https://lawandmore.eu/app অ্যাপয়েন্টমেন্টment/
मलाई कुन वकिल चाहिन्छ भनेर म कसरी जान्ने?
तपाईलाई कुन वकिल चाहिन्छ तपाईको कानूनी प्रश्नको प्रकृतिमा भर पर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ संग तपाइँको कम्पनी को बारे मा एक प्रश्न छ? त्यसोभए तपाईलाई एक वकिल चाहिन्छ जो कम्पनी कानूनमा विशेषज्ञ छ। के तपाईंको कानुनी प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र छ? त्यसोभए तपाईं एक वकिलको साथ राम्रो हुनुहुन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो पनि नोट गर्नुपर्दछ कि सबै कानुनी प्रश्नहरू कानूनको एक भन्दा बढी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जसले गर्दा कानूनको प्रत्येक क्षेत्रलाई सम्बन्धी ज्ञान भएका एक वकिललाई संलग्न गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
Law & More कर्पोरेट कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून र टेक्नोलोजीको साथ साथै श्रम कानून, परिवार कानून, अध्यागमन कानून र घर जग्गा कानून कानूनको क्षेत्रमा सक्रिय कानून फर्म हो। हाम्रो डच (प्रक्रियात्मक) कानूनको विस्तृत ज्ञानको अतिरिक्त, Law & More यसको सेवाहरूको क्षेत्र र प्रकृतिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय हो। हाम्रा ग्राहकहरुलाई उत्तम सम्भव सेवा प्रदान गर्न, हामीसंग बहुभाषी वकिल र न्यायाधीशहरूको समर्पित टोली छ जसले अ speak्ग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिश, टर्की, रूसी र युक्रेनी भाषा बोल्छन्।
के तपाईं कानूनको अर्को क्षेत्र खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए हाम्रो विशेषज्ञता पृष्ठमा हेर्नुहोस् जुन कानूनको सबै क्षेत्रहरू सूचीबद्ध गर्दछ। हाम्रो वकिलहरु उल्लेख गरिएको सबै क्षेत्रहरु मा विशेषज्ञ छन् र कुनै पनि क्षेत्र मा तिमीलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछ।